दूध दिने वस्तुहरू | Nagarik News - Nepal Republic Media
दूध दिने वस्तुहरू
– धर्म पोखरेल
दीपेश तीन कक्षामा पढ्छ । ऊ गरीब भए पनि मेहनती छ । ऊ कक्षामा सधैं प्रथम हुन्छ । रमिला, मुस्कान, प्रमोद, विकल्प र आयुष उसका मिल्ने साथीहरू हुन् । पढाइका साथै ऊ आमाबुबालाई घरका काममा पनि सकेको सहयोग गर्छ । ऊ बस्ने घरनजिकै एउटा किराना पसल छ । ऊ बस्ने कोठाबाट त्यो पसल मजाले देखिन्छ । ऊ धेरैजसो त्यो पसलतिर हेरिरहन्छ । प्रत्येक बिहान उसले त्यस पसलमा ट्रकले दूध ल्याएर छोडेको देखेको छ ।
एक दिन कक्षामा गीता गुरुआमाले दीपेशलाई सोध्नुभयो, ‘दीपेश, तिमी भन त, दूध केले दिन्छ ?’
दीपेशले सजिलै उत्तर दियो, ‘ट्रकले मिस ।’
दीपेशको उत्तर सुनेर कक्षाका साथीहरू गलल हाँसे । गीता मिसलाई उसको उत्तर सुनेर झनक्क रिस उठ्यो । गुरुआमालाई दीपेशले जानीजानी ठट्टा गरेर त्यस्तो उत्तर दियो भन्ने लाग्यो । यस्तो क्षमता भएको विद्यार्थी पनि नचाहिने समयमा किन जिस्किएको होला भन्ने उहाँलाई लाग्यो । आपूmलाई जतिसुकै रिस उठे पनि रिसलाई काबुमा राखेर गुरुआमाले त्यही प्रश्न प्रमोदलाई सोध्नुभयो । प्रमोदले भन्यो, ‘गाईले मिस ।’
प्रमोदको उत्तर गुरुआमालाई मन प¥यो । उहाँले मायालु पाराले फेरि भन्नुभयो, ‘तिमीले ठीक भन्यौ प्रमोद, तिमीले कसरी थाहा पायौ नि ?’
प्रमोदले भन्यो, ‘गुरुआमा, म बेलाबेलामा मेरा बुबाआमासँग मेरो गाउँ रामेछाप जान्छु । त्यहाँ मैले गाई दुहेको र शहरतिर दूध बेच्न लगेको आफ्नै आँखाले देखेको छु । हामी शहरमा बस्ने मानिसहरूले त्यही दूध त खाएका हौँ रे ! मेरा हजुरबाले भन्नुभएको ।’
प्रमोदको उत्तर सुनेर गुरुआमा खुसी हुनुभयो । उहाँले प्रमोदलाई स्याबासी दिनुभयो । आपूmले उत्तर नमिलाएकोमा र गाई कस्तो हुन्छ भन्ने नदेखेकोमा दीपेशलाई नरमाइलो लागिरह्यो । अझ उसको उत्तर सुनेर साथीहरू हाँसेकोमा उसलाई धेरै पिर प¥यो ।
ऊ विद्यालयबाट घर फर्कियो । उसले आफ्ना आमाबुबासँग आफ्नो गाउँको घरबारे सोध्यो । उसले दूध केले दिन्छ भनेर बुबाआमासँग सोध्यो । गुरुआमाले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर आपूmले नमिलाएकोमा उसले चित्त दुखाउँदै बुबाआमासँग गुनासो ग¥यो र गाउँ घुम्न जाने इच्छा सुनायो ।
छोराको इच्छा बुझेर उसका बुबाआमाले समय मिलाएर उसलाई गाउँ लिएर जानुभयो । गाउँ पुगेपछि उसले गाईले दूध दिएको देख्यो । उसले गाई दुहेको पनि देख्यो । छिमेकी घरमा काकाले भैंसी दुहेको र ढुंग्राभरि दूध ल्याएको पनि देख्यो । एउटा घरमा बाख्रीले पाठापाठीलाई दूध चुसाउँदै थियो । अर्को घरमा कुकुर आफ्ना छाउराछाउरीलाई दूध चुसाउँदै थियो । घरको एउटा कुनामा बिरालो पनि बच्चालाई दूध चुसाउँदै थियो । जन्तरे मगरको सुँगुरको खोरछेउमा समेत सुँगुरका पाठापाठी तिनीहरूकी आमाको दूधमा झुन्डिरहेका उसले देख्यो ।
उसले सोच्यो, ‘दूध त गाईले मात्र दिन्छ होला भन्ने लागेको थियो, होइन रहेछ । भैैंसी, बाख्रा, कुकुर, बिरालो, सुँगुर समेतले दूध दिंदा रहेछन् । गीता गुरुआमाले गाईले दूध दिन्छ भन्दा किन ठीक भन्नुभएको होला ! प्रमोदले उत्तरमा भैैंसी, बाख्रा, कुकुर, बिरालो, सुँगुर किन नभनेको होला ! म विद्यालय पुगेपछि यी सबै जनावरहरूले दूध दिन्छन् भनेर झन् राम्रो उत्तर दिन्छु भन्ने सोच्दै दीपेशले गाउँमा दुईचार दिन बितायो ।’
फेरि उसले सम्झियो, ‘मैले बढी जान्ने र बाठो भएर कुरै नबुझी उत्तर दिनु हुन्न । अस्ति जसरी नै कक्षामा साथीहरूले हाँसेर मेरो खिल्ली उडाए भने ! गुरुआमा रिसाउनुभयो भने ! एक पटक बुबालाई सोधेर प्रस्ट हुनुप¥यो ।’
दीपेशले बुबालाई सोध्यो, ‘बाबा, दूध त भैैंसी, बाख्रा, कुकुर, बिरालो, सुँगुरले पनि दिँदा रहेछन् त । किन गाईले मात्र भन्दा पनि उत्तर मिलेको बाबा ?’
छोराको प्रश्नले बुबा धेरै खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, ‘तिमीले राम्रो प्रश्न ग¥यौ छोरा, वास्तवमा तिमीले भनेझैं भैंसी, बाख्रा, कुकुर, बिरालो, सुँगुर आदिले पनि दूध दिन्छन् र आफ्ना बच्चाहरूलाई हुर्काउँछन् । अझै माथि लेकतिर त याक, भेडा र च्यांग्राले समेत दूध दिन्छन् । हामी प्रायः गाईको दूध पोषिलो हुने भएकाले खाने गर्दछौँ । बजारतिर बेच्न लाने दूध पनि धेरैजसो गाईको हुने भएकाले गीता मिसले पनि गाईले दूध दिन्छ भन्दा ठीक भन्नुभएको हो । मानिसहरू गाईको जस्तै भैंसी, भेडा, च्यांग्रा र बाख्राको दूध समेत खाने गर्दछन् तर बिरालो, कुकुर र सु्ँगुरको दूध भने मानिसहरू प्रयोग गर्दैनन् ।’
दीपेशले अब प्रस्टसँग कुरो बुझ्यो । प्रत्यक्ष रूपमा दूध दिने जनावरहरू देखेर र सोधेर उसले पुस्तकमा पढेभन्दा बढी ज्ञान प्राप्त ग¥यो । उसले अझै केही दिन गाउँमा बसेर मात्र शहर फर्कने सोच बनायो ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ १२:२७ शनिबार